Mauricio Pochettino oo uu ku dhacay Korona Fayras labo todobaad kaddib markii loo magacaabay Macallinka cusub ee Kooxda PSG – Gool FM
(Paris) 16 Jan 2021. Mauricio Pochettino ayuu haleelay caabuqa Korona Fayras labo todobaad kaddib markii loo magacaabay macallinka cusub ee Kooxda PSG.
Tababaraha reer Argentine ee Mauricio Pochettino ayaa seegi doona kulanka Kooxdiisa PSG ay wajahayso Angers caawa, maadaama uu karaantiil galay markii laga helay KOOFID 19.
Kooxda Ligue 1 ayaa xaqiijisay in macallinkii hore ee Spurs uu geli doono xaalad karaantiil ah, waxaana shaqada kooxda sii weydi doona caawiyeyaashiisa Jesus Perez iyo Miguel D’Agostino marka ay caawa kooxdu u safreyso Angers.
Pochettino ayaa maamulay saddexda kulan kooxda Parisian, waxaana uu u qaaday koob kulankiisii saddexaad kaddib markii ay 2-1 uga adkaadeen Marseille, isla markaana ay ku guuleysteen the French League Cup.
“Macallinka kooxda koowaad ee PSG, Mauricio Pochettino waxaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay Korona Fayras, markii la mariyey tijaabada PCR” ayuu u dhignaa bayaan ka soo baxay kooxda reer France.
“Sidaa darteed waxa uu geli doonaa karaantiil si loo maro xakameynta caafimaad ee loo dajiyey caabuqaan.
“Caawiyeyaashiisa Jesus Perez iyo Miguel D’Agostino ayaa sii wadi doona kooxda kulanka aan maanta la ciyaareyno Angers”
Colin Dagba, Thilo Kehrer, Rafinha ayaa sidoo kale garoomada ka maqan kaddib markii laga helay faafahan, laakiin xiddigaha sare ee PSG, Neymar iyo Kylian Mbappe ayaa u dagaalami doona sidii ay caawa guul ku gaari lahayd kooxda ku jirta kaalinta labaad ee Ligue 1.